Faah faahin laga Helayo ilaa 5 Qarax oo muqdisho ka kala dhacay+Sawiro – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Faah faahin laga Helayo ilaa 5 Qarax oo muqdisho ka kala dhacay+Sawiro
Faah faahin laga Helayo ilaa 5 Qarax oo muqdisho ka kala dhacay+Sawiro
Qaraxa Kowaad oo ahaa ismiidaanin ayaa wuxa uu ka dhacay irida hore ee wasarada shaqada iyo shaqalaha ee Dowlada Soomaaliya, kadibna rag tirsan Alshabab ayaa gudaha ugalay wasaradda waxay bilaaben rasaas iyo Tuurista Bambo gacmeed.
Shaqalaha wasarada dhamaan waxay iskugu tageen sida xogta lagu helay Dabaqa sare ee wasarada shaqa iyo shaqalaha, Qaarkoodna Waa ay ka bad bxsadeen qaraxa ka dib Xarunta
Qarax labaad aya ka dhacay isla wasaradda agteeda, waxuuna ahaa mid geestay Qasaara Kala duwan, inkastoo Uusan geesan Qasaara badan.
Wili waxa kujira wasarada Rag katirsan Alshabaab, Ciidamda Dowldda ayaa wada dadaalo lagu doonayo in lagu so af jaro weerarka Alshabaab ay ku soqaden Xarunta wasaarada shaqada iyo shaqaalaha, oo udhaw Wasaarada Howlaha guud, iyo Taliska Guud ee Ciidamada boliiska soomaaliyeed.
“Dhinaca kale Qaraxyo kale ayaa ka dhacay Agagaarka Ex-contarool afgooye ee muqdisho.
Qaraxyadaan oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa mid ka mid ah waxuu haleelay gaari ay wateen ciidamada dowlada soomaaliya, waxaana geeriyooday 3 askri oo ka Tirsan Ciidamada sida ay inoo sheegeen goob joogayaal.
sidoo kale qarax labaad oo ka dhacay agagaarka shiikh cali suufi ee Degmada Hodan.
“Wadan Keliya Oo Ay Somaliland Saaxiib La Tahay Oo Ina Aqoonsani...
Xisbiga Waddani oo ka hadley imaatinka Hargeysa ee Farmaajo